Iindidi eziqhelekileyo zoomatshini
ngomphathi ku 21-08-26
Kuya kubakho ulwazi oluninzi ngoomatshini ongayaziyo malunga noomatshini. Machining ibhekisa kwinkqubo yokutshintsha ledayimenshini iyonke okanye ukusebenza workpiece nezixhobo ngoomatshini. Zininzi iintlobo zoomatshini. Masiqwalasele okuqhelekileyo kuthi ...
Inkqubo yokunyathela yindlela yokulungisa isinyithi. Isekwe kwisiphene seplastiki. Isebenzisa izixhobo zokufa kunye nezokunyathela ukwenza uxinzelelo kwiphepha ukuba lenze iphepha ukuvelisa ukusilela kweplastiki okanye ukwahlukana, ukuze kufunyanwe iinxalenye (zokunyathela iinxalenye) ezinemilo ethile, ubungakanani kunye nokusebenza ...
Inkqubo yokunyathela isinyithi
Inkqubo yokunyathela: kwisikhululo sokuqhubekeka ngokuqhubekayo sokunyathela die, indawo yokusebenza yomatshini wokulungiselela isikhonkwane inyityiliselwe ezantsi ukugqibezela iinkqubo ezinje ngokuwisa, ukwenza kunye nokudibanisa. Nangona kunjalo, isenenxalenye encinci edibene ne-stamping sheet, kwaye iphepha lokunyathela lingena ...
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Izikrufu, Izahlulo Ihowuliseyili, Plate Intwasahlobo, Ukulahlwa kweMagnesium, Aluminium Cnc ngomshini Iintetho, Iimveliso zeSitayile seSinyithi, Zonke iiMveliso